UMakhalanjalo udwebe ubuciko bekhava yengoma yakhe | Scrolla Izindaba
UMakhalanjalo udwebe ubuciko bekhava yengoma yakhe
Sekuyinjwayelo ukuthi umculi noma umdidiyeli abukele ezingomeni zamzukwana noma zomdabu bese ezenza isimanje, kungaba ngokuzisampula noma ukuzenza kabusha ngokuphelele.
Kodwa umculi uMpho “Makhalanjalo” Moshoeshoe – obuye aziwe ngoMichael Angelo – wenza okungaphezu kwalokho. Wenza umculo wangempela othi mawufane nowangonyaka wezi-1995, lapho ingoma yomdansi nomculi we-Kwaito uArthur Mafokate ethi “Kaffir” yaba yingoma yokuqala ye-Kwaito eyadayisa kakhulu kuleli.
Utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi leli gama elithi Makhalanjalo “yinganekwane esuselwe kumalume wasekasi (elokishini) owayengumuntu onethalente elihle kodwa ongakaze alisebenzise ithalente lakhe ngenxa yokwesaba nokuzingabaza,” kodwa kulokhu umalume uphumile ukuzothatha isabelo sakhe.
“Ngizibona ngiphinde ngazalwa kabusha njengomalume kodwa ngokungafani nalaba abake baba la, ngizothatha konke okudalelwe mina,” kusho lo mculi oneminyaka engama-26 ubudala waseKapa.
Lo mculi uthi akaziboni “enethalente, kodwa uzibona njengomuntu owazi ubuciko” enezela ngokuthi wakhuthazwa ngabafowabo abadala ngesikhathi ekhula.
Uphinde wavezela abakwa-Scrolla.Africa ukuthi umatasa nge-albhamu entsha esihloko sithi Amanzi. Lezi zindaba ziza ngemuva nje kokuba lo mculi ekhiphe ingoma yakhe yakamuva ephuma kwi-albhamu, ethi Thand’izinto, iphrojekthi ayichaza ngokuthi “yinkumbulo yezikhathi ezangibumba njengengane eyakhula iheheka ebuhleni.”
UMakhalanjalo usebenzisa isiXhosa ukudonsela umlaleli emavesini akhe okungathi ingxoxo agcwele amahlaya, kodwa ebe enza isiqiniseko sokuthi akasimbozi isigqi se-Kwaito esiku-Thand’izinto.
Futhi kubonakala sengathi ubuhlakani bakhe abunamkhawulo njengoba ubuciko bekhava yerekhodi yakhe bupendwe nguye.
Uchaze wathi, “Ngesikhathi ngiseGoli ngizothuthukisa le ngoma, umngani wami wangimemela kwiseshini ‘yeziphuzo zewayini’ kuleli hhotela lezitolo elihle elibizwa nge-Daze House for paint. Ngaphambi kwalapho ngangingakaze ngidwebe noma ngipende ngisho usuku empilweni yami,” enezela ngokuthi konke kwenzeka kanjani, yingakho kwakumele awenze ubuciko bakhe bekhava.
“Kule albhamu yami ‘Amanzi’, ngiyavuma ukuba ngumuntu osemncane kanye nayo yonke ingcindezi ehambisana nalokho kodwa ngibe futhi ngijabulela nesipho esiyimpilo,” kusho uMakhalanjalo.
Ngemuva kokukhipha iThand’izinto ngosuku lokuqala kowe-2021, uhlose ukukhipha Amanzi ngasekupheleni konyaka.
“Ngingasho kugcwale umlomo ukuthi ngiyaziqhenya hhayi ngemi kuphela, kodwa nangeqembu elingisizile ukwenza lo msebenzi ube yimpumelelo.”